ရှေးဟောင်းဇာတ်လမ်းတွဲကို ဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေ ရိုက်ကူးထားတာကို ကြည့်ချင်ပါသလား? ဒါဆိုရင်တော့ “Novoland: Pearl Eclipse” သိုင်းကားကို ညွှန်းဆိုပေးပါရစေ။ ထိပ်တန်းမင်းသမီးချော Yang Mi နဲ့အတူ အပြိုင်မင်းသားနှစ်ယောက်အဖြစ် Chen Wei Ting နဲ့ Xu Kai Cheng တို့က ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာကြောင့် ဇာတ်လမ်းစတင်ရိုက်ကူးကတည်းက လူအများစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။
အပိုင်းပေါင်း ၅၅ပိုင်းထိပါဝင်ပြီး စိတ်ကူးယဥ်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုမှ သဘာဝလွန်စွမ်းအားပိုင်ရှင်တွေကော၊ နန်းတွင်းက အာဏာယှဉ်ပြိုင်မှုတွေပါ ပါဝင်လာမှာမို့လို့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းနေပါတယ်။ “Novoland: Pearl Eclipse” ဇာတ်လမ်းကတော့ စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့မှာပဲ ပြသခွင့်လိုင်စင် တရားဝင်ရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
လူအများက အာရုံစိုက်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းသစ်ဖြစ်တာကြောင့် ဒီလိုင်စင်ရတဲ့သတင်းက ချက်ချင်းဆိုသလို Trending ဝင်သွားပြီး ပြသမယ့်အချိန်ကို ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၂၀ ကတည်းက Hot နေခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး ပြသဖို့အချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့တာဟာ ၂၀၂၁ မှ ဆန္ဒ‌တွေ ပြည့်ဝလာပါတော့မယ်။
ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးက ကြည့်ရှုသူတွေအကြိုက်တွေ့မှာ သေချာပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့…Zheng မင်းဆက်လက်ထက် Novoland လို့ အမည်ရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာ မှော်ဆန်တဲ့ ပုလဲတစ်လုံးထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ သတင်းတွေရရှိပြီးနောက် ဒီပုလဲကို ရှာဖွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ လူတိုင်းကြိုးစားလာခဲ့ပါတော့တယ်။
Naga မျိုးနွယ်ဝင် အပျိုစင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်ရည်ကနေသာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဒီမှော်ဝင်ပုလဲလေးကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် မျိုးနွယ်တစ်ခုလုံး သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အထိ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေခဲ့ရရှာပါတယ်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ Hai Shi (Yang Mi) ဟာ သူမရဲ့မိဘတွေတင်မကဘဲ မျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးပါဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်လာရပါတော့တယ်။
အဲ့အချိန်မှာပဲ နန်းတွင်းအရာရှိဖြစ်တဲ့ Fang Zhu (Chen Wei Ting) က သူမကို ကယ်ဆယ်ခဲ့ပြီး Fang Zhu ရဲ့ တပည့်တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ နိုင်ငံရေးအရှုပ်အထွေးတွေကြား ဘုရင်ဖြစ်သူ Chi Zhong Xu (Xu Kai Cheng) ကလည်း အခြေအနေတွေပိုဆိုးလာအောင်သာ ဖန်တီးနေခဲ့ပြီး ပဋိပက္ခတွေ များသထက်များလာပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ Fang Zu ရဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုကြောင့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေတိုးတက်လာခဲ့ပြီး Hai Shi ကလည်း ယောက်ျားလေးအယောင်ဆောင်ရင်း ဘုရင့်ရဲ့ တော်ဝင်သက်တော်စောင့်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ အနေနီးစပ်လာတော့ Hai Shi ဟာ ဘုရင့်အပေါ် မေတ္တာရှိလာခဲ့ပေမဲ့ ယောက်ျားလေးပုံစံကြောင့် ဘုရင်ဖြစ်သူက အထင်လွဲလာခဲ့ပါတယ်။
အနေနီးစပ်လာရင်း Hai Shi က မိန်းကလေးဆိုတဲ့ အဖြစ်မှန်ကို ဘုရင်က သိရှိသွားတဲ့အခါ ပြန်ချစ်သွားမှာလား? Hai Shi ရဲ့တကယ့်ခံစားချက်အစစ်အမှန်က ဘယ်သူ့အပေါ်မှာလဲ? သူမတကယ်ချစ်နေတဲ့သူက ဘုရင်ဖြစ်သူ Chi Zhong Xu လား? ဆရာဖြစ်သူ Fang Zhuလား? စဖြင့် အချစ်ဇာတ်လမ်းကောင်းကိုမှ ရှေးဟောင်းနန်းတွင်းဇာတ်လမ်းပုံစံနဲ့ မပျင်းရအောင် ဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။ ပြသမယ့်အတိအကျမထွက်သေးပေမဲ့ လိုင်စင်ကျပြီးဖြစ်လို့ ကြည့်ရဖို့နီးနေပြီလို့ ယူဆရပြီး လွတ်မသွားအောင် စောင့်နေရပါတော့မယ်။
Next နာမည်ကြီးမင်းသမီးချော (၃) ဦးနဲ့ 'ဇာတ်လမ်းစုံတွဲ' တွေအဖြစ် ပွဲထွက်လာတော့မယ့် Mark Prin »
Previous « 1st album က Spotify မှာ 100 M ပြည့်သွားပြီဖြစ်သလို 2nd solo album ကိုလည်း စီစဉ်နေတဲ့ Kai